တရားႏွင္႔ ဂါထာေတာ္မ်ား Archives - Page2of 16 - Latest Myanmar News
ဝဲဘက်ပုခုံးတွင် သင်္ကန်းတော်ဖုံးလွှမ်းရတာ ဘာကြောင့် လဲ
February 8, 2021 by Latest Myanmar News
ရဟန်းသံဃာတော်များသည် ဝဲဘက်ပုခုံးကို သင်္ကန်းတော်ဖြင့် ဘာ့ကြောင့် ဖုံးလွှမ်းရပါသနည်း တို့အဘဘုရား သာသနာမှာ လက်ဝဲတော်ရံ လက်ယာတော်ရံဆိုတာ မရှိကြပေဘူးလား “ရှိပါတယ်ဘုရား” လက်ဝဲတော်ရံဆိုတာ “တန်ခိုးအရာမှာ ဧတဒဂ်ရတဲ့ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်ပါဘုရား”လက်ယာတော်ရံဆိုတာ “ပညာအရာမှာ ဧတဒဂ်ရတဲ့ အရှင်သာရိပုတ္တရာပါဘုရား” ဟုတ်ပြီဗျာ.. တန်ခိုးက လက်ဝဲ၊ ပညာက လက်ယာ…တန်ခိုးဆိုတာ အာသဝေါတရားတို့ရဲ့ ကုန်ရာခန်းရာ အရဟတ္တဓဇ၊အရဟတ္တရဲ့အလံတံခွန်သာဖြစ်တယ်။ ပညာဆိုတာကတော့ ဝိပဿနာပညာ၊ မဂ်ပညာ၊ ဖိုလ်ပညာကနေ နိဗ္ဗာန်ကို ရဖို့ရောက်ဖို့မဟုတ်လား။ ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်သဘာဝဆိုတာ အဆန်းကြိုက်၊ တစ်ခုရိုး တစ်မျိုးပြောင်းပြီး တစ်သံသရာလုံး ဆန်းတယ်ထင်တာတွေနောက် လိုက်ခဲ့ကြတယ်။ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် လမ်းဘေးက မျောက်ပွဲ၊ မျက်လှည့်ပွဲကအစ ဆန်းတယ်ထင်တာ မှန်သမျှမှာ လူတွေမေ့မျော သာယာနေတတ်ကြတယ်။ ဒီတော့ တန်ခိုးရဲ့ ဆန်းဆန်းပြားပြား ဖမ်းစားမှုအပေါ် မေ့လျော့တွေဝေ သာယာနေကြရင် မဂ်ပညာ ဖိုလ်ပညာကွယ်မှာပဲ၊ … Read more
Categories တရားႏွင္႔ ဂါထာေတာ္မ်ား Leaveacomment
February 7, 2021 by Latest Myanmar News
တောမီးအဝိုင်းခံရချိန်တွင် အကျဉ်းအကျပ်ထဲရောက်နေသော ဘုရားလောင်းငုံးမင်းသစ္စာပြုပုံ သစ္စာမဆိုခင် ဆင်ခြင်ပါရန် ငုံးမင်းသည် သစ္စာမပြုခင် ပွင့်တော်မူခဲ့ပြီးသော ဘုရားရှင်တို့၏ သီလသမာဓိပညာဉာဏ်ဂုဏ်တွေကိုဆင်ခြင်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်တို့၏ ထိုးထွင်းသိသွားသောဉာဏ်တော် (သဗ္ဗညုတဉာဏ်) နှင့် ဘုရားရှင်တို့သိသွားသည့်တရား(နိဗ္ဗာန်, မဂ္ဂင်(၈)ပါး)အဲ့ဒါတွေကို အရင်ဆင်ခြင်ပါတယ်။ မဂ္ဂင်(၈)ပါးနှင့်နိဗ္ဗာန်တရားတွေမှာ စွမ်းအားတွေရှိပါတယ်၊ အဲ့ဒါတွေ ဆင်ခြင်နိုင်ရင် ဆင်ခြင်နိုင်သလောက်အစွမ်းထက်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ မဂ္ဂင်(၈)ပါး ပြည့်သည့်အခိုက် (မဂ်ကျသည့် အခိုက်) ကမ်ဘာပျက်မယ်ဆိုရင်တောင် မပျက်ပဲ စောင့်ရကြောင်း အဆိုရှိပါတယ်၊ နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြုနေတဲ့အချိန် သမာပတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာ မီးရှို့ရင် မီးမလောင်ပါ။ တောင်နဲ့ဖိတောင် ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဟုလို့ ဆိုပါတယ်။ ဓမ္မစကြာတရားစဟောသည့် အချိန် ငရဲမီးတွေပါ တဒင်္ဂငြိမ်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စသည်အားဖြင့် တရားရဲ့စွမ်းအားတွေက ဆင်ခြင်ရင် ဆင်ခြင်နိုင်သလောက် များစွာရှိပါတယ်။ သစ္စာပြုလိုသော ယောဂီများသည် ဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်နှင့် တရား၏ဂုဏ် (ဝဋ်ဒုက္ခမှထွက်မြောက်ကြောင်း … Read more
ဆွမ်းတော်စွန့်သည့် သစ်သီး နှင့် ပန်းကို ပြန်သုံး ရမရ
February 5, 2021 by Latest Myanmar News
ဆွမ်းတော်တင်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်၍ မေး။ ။ အရှင်ဘုရား။ ဘုရားမှာ တင်ထားတဲ့ သစ်သီးကိုကျတော့ လူတွေစားကြတယ်။ ပန်းကျတော့ လူတွေပြန်မသုံး ရဘူးလို့ ပြောကြတယ်ဘုရား။ အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲ သိချင်လို့ပါ ဘုရား။ နောက်ပြီး ငရဲကြီးတယ် ဆိုတာမျိုးရောရှိလားဘုရား။ အဲဒါလေး ဖြေပေးစေချင် ပါတယ်ဘုရား။ ဖြေ။ ။ တကယ်တော့ ပန်းကိုလည်း မပန်သင့်ဘူး သစ်သီးလည်း ပြန်မယူသင့်ပါဘူး။ လှူတဲ့လူဆိုရင် ပိုတောင် မယူသင့်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လှူတဲ့လူက မုတ္တစာဂီ-တွယ်တာတပ်မက် တွန့်တိုမှုမရှိဘဲ လွတ်လွတ်စွန့်ကြဲပြီးသား ဖြစ်လို့ပါ။ ဆွမ်းတော် တင်တယ်၊ သောက်တော်ရေကပ်တယ်၊ သစ်သီးဝလံ လှူတယ်ဆိုတာ မိမိက သက်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်ကို တကယ်ကြည်ညိုတဲ့ စိတ်နဲ့ သက်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင် ကိုယ်စား ရုပ်ပွားတော်ကို ကပ်လှူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလှူပြီဆိုကတည်းက သက်တော်ထင်ရှားဘုရားကို အာရုံပြုပြီး လှူထားသည့်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် … Read more
February 3, 2021 by Latest Myanmar News
တစ်စက္ကန့်အတွင်း ကုဋေ တစ်သိန်းလောက်ကြီးမားတဲ့ ကုသိုလ်တွေရရှိသွား နိုင်မည့် နေနည်းများ ၁။ နိုးနိုးချင်း….မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားဆုံးမသည့်အတိုင်းနိုးနိုးချင်း ထထချင်း အနေအထား မပြောင်းမရွေ့ပဲဝင်လေ ထွက်လေလေးကိုသတိကပ်မှတ် နေလိုက်ပါမယ်။ ဒါဆိုကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တွေက တစ်စက္ကန့်မှာကုဋေတစ်သိန်းနှုန်းဖြင့် ရရှိသွားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခါတိုင်းလို သောကဖြင့် နိုးထခြင်းမဟုတ်တော့သည့်အတွက် မင်္ဂလာတရားဖြင့်စတင်သည့် နေ့လေးဖြစ်သွားပါတယ်။ ၂။ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဟူသမျှ….အိမ်သာသွားရာ၊ သွားတိုက်ရာ၊ မျက်နှာသစ်ရာတစ်မိနစ်ပဲဖြစ်ပါရစေ၊ သတိကပ်၍ သိနေရန်ကြိုးစားနေလိုက်ကြပါမယ်။ ၃။ သက်ရှိထင်ရှား မြတ်စွာဘုရားအား… ၃.၁. မပြုမီ ဝမ်းသာ….ရေတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည့်ပြည့်စုံစုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်အားကပ်လှုရန် ပြင်ဆင်ရာမှာကုသိုလ်ပြုရတော့မယ်ဟု ဝမ်းသာပီတိတွေဖြစ်နေပါ့မယ်။ ၃.၂. ပြုဆဲဝမ်းသာ….ဘုရားကပ်လှုရာမှာ သက်တော်ထင်ရှားရှိသည်ဟု မှန်းဆပြီး ကုသိုလ် ပြုရပြီဟုဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာဖြစ်နေပါ့မယ်။ ဒါဆိုကုသိုလ်က အများကြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ ၃.၃. ပြုပြီး ဝမ်းသာ….ကုသိုလ်တို့ကို ပြုခဲ့ရလေပေပြီဟုပြန်လည်ဆင်ခြင်ပြီး ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်နေလိုက်ပါ။ ၃.၄. … Read more
သူတပါးအလှူကို တားမြစ်လျှင် ကြုံရမည့် အန္တရာယ် (၃)ပါး
January 30, 2021 by Latest Myanmar News
အလှူမြစ်​တား (၃)ပါးဟု အန္တရာယ် သူတစ်ပါး ပေးလှူနေတာကို ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်က တားမြစ်တတ်တယ်။ဒကာကြီးတွေက လှူချင်ရင် ဒကာမကြီးတွေက ကန့်ကွက်တယ်။ ဒကာမကြီးတွေက လှူချင်ပြီဆိုရင် ဒကာကြီးက ကန့်ကွက်တယ်။ သားသမီးတွေက လှူချင်ရင် မိဘတွေက ကန့်ကွက်တယ်။ မိဘတွေက လှူချင်ရင် သားသမီးတွေက ကန့်ကွက်တယ်။ သူတစ်ပါး ပေးလှူတော့မယ်ဆိုရင် ထိုပေးလှူနေတဲ့ အလှူဒါနကို လာပြီး တားမြစ်တယ်။ အဲဒီ တားမြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဘာလုပ်တာလဲ? အန္တရာယ် (၃)မျိုး, ဘေးဥပါဒ် (၃)မျိုးကို ပြုလုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ သူတစ်ပါး ပေးလှူနေတဲ့အလှူဒါနတစ်ခုကို သွားပြီးတားမြစ်ရင် ဒီတားမြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သည် အန္တရာယ် (၃)မျိုးကိုပြုလုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဘုရားရှင်က ဟောကြားတော်မူပါတယ်။ အဲဒီ (၃)မျိုးဆိုတာက ဘာတွေလဲ? ၁။ ဒါနကုသိုလ်၏ အန္တရာယ် ဒါနဆိုတာက လှူခဲ့မယ်ဆိုရင် … Read more
ဘုရားရှင်တိုင်းသည် အဘယ့်ကြောင့် လူပျိုမဟုတ်ပဲ အိမ်ထောင်ရှိ သူများ ဖြစ်နေကြရပါသလဲ
January 28, 2021 by Latest Myanmar News
လူပျိုဘုရား ဘာကြောင့် မရှိကောင်းပါသလဲ ဒကာ။ ။ “ ဗောဓိ ကုက္ကို ညောင်ထိုထို လူပျိုဘုရား မရှိငြား”ဟူသော ရှေးပေါရာဏ စကားဆိုရိုးအရ ဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းလာ ဘုရားရှင်ဖြစ်စဉ်ကို လျှောက်ဖတ်ရာ လူပျိုဘုရားကိုရှာမတွေ့ဘူး ဆရာတော်၊ အဲဒါဘာကြောင့်လဲ၊ ရှင်းပြပါဦးဘုရား၊ အတိုဆုံးနည်းနဲ့ သိလွယ်ရုံပဲပေါ့။ ဆရာ။ ။ ကြံကြံဖန်ဖန် ရှာရှာဖွေဖွေ မေးတတ်တဲ့ ဒကာကြီးတွေပဲကို၊ ဘုရားဖြစ်ဖို့ရာ လုပ်ငန်းကျင့်စဉ်အဆင့်အတန်း သင်ရိုးမာတိကာ သုံးဆယ်ထဲမှာ နေက္ခမ္မပါရမီဆိုတဲ့ ကျင့်စဉ်က သုံးမျိုးပါတယ်၊ ကိုင်း…မှတ်သားထားကြပေတော့။ (၁) နေက္ခမ္မ ပါရမီ – အနှောင်အဖွဲ့ အတွယ်အတာ အတားအဆီး ငဲ့စရာတွေ ပြောပလောက်အောင်မရှိဘဲ ရိုးရိုးတောထွက်သွားခြင်းမျိုး။ (၂) ဥပ နေက္ခမ္မ ပါရမီ – ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းနှင့်တူသော မိဘ ဆွေမျိုးနဲ့ အိုးအိမ် … Read more
ဆီမီးပူဇော်ရခြင်း ကြောင့် ရရှိသည့် အကျိုးများ
ဆီမီး လှူရသောအကျိုး အလှူဒါနပြုကြရာ တွင် ဆီမီးလှူရသော အကျိုး ရှစ်ပါးဟူ၍ ရှိပါသည်။ ထိုအကျိုး ရှစ်ပါးတို့မှာ – ၁။ ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ကိုရခြင်း။ ၂။ အမိ၀မ်းတွင်းမှ ကန်းသောအမျိုး၌ မဖြစ်ခြင်း၊ ၃။ တွေဝေငိုက်မျဉ်းခြင်းမှကင်းခြင်း၊ ၄။ ကြည်လင်သော မျက်စိရှိခြင်း၊ ၅။ အမျိုးစည်းစိမ် အခြံအရံအားဖြင့် မြတ်ခြင်း၊ ၆။ အမှတ်မရှိသော အရပ်၌ရှိသောဝတ္ထုတို့ကို ထိုအရပ်မှ မြင်နိုင်ခြင်း၊ ၇။ တောက်ပသော အရောင်ရှိခြင်း၊ ၈။ နတ်ကဲ့သို့တင့်တယ်ခြင်းဟူ၍ဖြစ်ကြပါသည်။ ချစ်စွာသော စာရှုသူများရှင့် …။ စာရှုသူများ အားလုံးလိုလိုပင် မြတ်စွာဘုရား ရှင်အား ဆီမီးလှူခြင်း ကုသိုလ်နှင့်အတော်ပင် နီးစပ်လှူဒါန်းကြဖူး ပေလိမ့်မည်။ တချို့လည်း နေ့ညမပြတ် ဆီမီးလှူဒါန်း ပူဇော်ကြသကဲ့သို့ အချို့လည်း ဘုရားစေတီ များတွင် သီတင်းကျွတ်၊ … Read more
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ အံ့ဖွယ် ၁၈ပါး
ဘုရားရှင်၏ အံ့ဖွယ်တော်(၁၈)ပါး (၁) ၀တ်တော်မူသော သင်္ကန်းတော်သည် ဖွပ်ဆိုးရခြင်း၊ ဟောင်းနွမ်းခြင်း မရှိြုခင်း။ (၂) ပရိက္ခရာ (၈)ပါးကို ဆောင်တော်မူလျှင် ကိုယ်နှင့်မထိ လက်လေးသစ်မျှကွာခြင်း။ (၃) တောထွက်တော်မူစဉ်က ပယ်ဖြတ်မူသောဆံတော်သည် လက်နှစ်သစ်မျှသာ တစ်သက်ပတ်လုံး တည်တော်မူခြင်း။ (၄) ဆွမ်းစားပြီးသော် သပိတ်တော်ဆေးလျှင် လက်တော်စင် ၊ လက်တော်ဆေး ၊သပိတ်တော်စင်၏။ (၅) မုန်ညင်းစေ့မျှသော ကြုတ်ထဲသို့ ၀င်နို်င်ခြင်း။ (၆) ရောင်ခြည်တော် (၆)ပါး လွှတ်တော်မူသော် အရပ်(၁၀)မျက်နှာကို ဖောက်ထွင်းခြင်း။ (၇) ဝေနေယျ သတ္တဝါသို့လိုက်၍ ကိုယ်တော်မှတစ်ပါးနိမ္မိတဘုရားပေါင်းများစွာ ဖန်ဆင်းနိုင်ခြင်း။ (အသေချေင်္) (၈) ခေတ်သုံးပါးတို့၌ အမိုက်တိုက်ကိုလည်းကောင်း အလင်းကိုလည်းကောင်း ပေးနိုင်ခြင်း။ (၉) အထက်ကောင်းကင်တွင် လဝန်းကဲ့သို့ မြင်တော်မူခြင်း။ (၁၀) လူနတ်တို့၏ စိတ်ကို … Read more
ရဟန်းသံဃာတော်များ မကြွ ထိုက်သောအိမ် (၉)မျိုး
January 17, 2021 by Latest Myanmar News
ရဟန်းများမကြွ ထိုက်သောအိမ် (၉)မျိုး ၁။ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ခရီးဦးမကြို ဆိုသော အိမ်၊ ၂။ မြတ်မြတ် နိုးနိုး ရှိမခိုးသော အိမ်၊၊ ၃။ နေရာထိုင်ခင်း မပေးသော အိမ်၊ ၄။ ထင်ရှားရှိသော လှူဖွယ် ဝတ္ထု တို့ကို သိုဝှက်ထားသော အိမ်၊၊ ၅။ လှူဖွယ်အများရှိလျက် အနည်းငယ်မျှသာ လှူသော အိမ်၊ ၆။ မွန်မြတ်သော လှူဖွယ်ဝတ္ထု ရှိပါလျက် မကောင်းသည်ကို လှူသော အိမ်၊၊ ၇။ မရိုမသေ ပေးလှူသော အိမ်၊ ၈။ တရားနာရန် မချဉ်းကပ်သော အိမ်၊၊ ၉။ တရားကို ကောင်းစွာ မနာကြားသော အိမ်။ (အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊၃၊၁၉၂) (မြန်မာ၃၊၁၉၃)ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။ ခရစ်ဒစ် Zawgyi ရဟန္းမ်ားမႂကြ ထိုက္ေသာအိမ္ … Read more
၀ိဇ္ဇာ နှင့် ဇော်ဂျီတို့ အဘယ်ဘုံဌာနတွင် နေထိုင်ကြပါသနည်း
January 16, 2021 by Latest Myanmar News
၀ိဇ္ဇာ၊ ဇော်ဂျီဆို သည်မှာ သိချင်တာလေးရှိလို့ မေးလျှောက်ပါရစေဘုရား။ဘာသာရေးကျမ်းစာတွေ အထူးသဖြင့် ဇာတ်တော်တွေမှာ ဝိဇ္ဇာ၊ ဇော်ဂျီတွေ အကြောင်းကို ဖတ်ရှုရပါသည်။ ၄င်းတို့သည် သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ အတွင်းအဘယ်ဘုံဌာနတွင် နေထိုင်ကြပါသနည်း။ သူတို့အကြောင်းကိုလည်း သိချင်လှပါသည်ဘုရား။ဝေလင်းအောင် ၀ိဇ္ဇာ ၅မျိုး လယ်တီဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဝိဇ္ဇာမဂ္ဂဒီပနီကျမ်းမှာဝိဇ္ဇာငါးမျိုးပြတယ်။ ၁။ ဝေဒဝိဇ္ဇာ = ဗေဒင်လေးပုံ။ ၂။ မန္တဝိဇ္ဇာ = လက္ခဏာကျမ်း၊ နိမိတ်ကျမ်း၊ နက္ခတ်ကျမ်း၊ ဂါထာမန္တာန်ကျမ်း၊ ဆေးကျမ်းတွေ၊ ၃။ ဂန္ဓာရီဝိဇ္ဇာ = အင်းဝိဇ္ဇာ၊ ပြဒါးဝိဇ္ဇာ၊ သံဝိဇ္ဇ္ဇာတွေရဲ့အစီအရင်နဲ့ နတ်သိကြားတွေရဲ့တန်ခိုး၊ အဘိညာဉ် တန်ခိုးတွေလိုအစွမ်းထက်တဲ့တန်ခိုး။ ဒီတန်ခိုးက နတ်တွေထက်တောင်စွမ်းလို့ နတ်တွေမနာလိုဖြစ်တတ်သတဲ့။ ၄။ လောကိယဝိဇ္ဇာ = အဘိညာဉ်တန်ခိုး။ ဒီတန်ခိုးကို ဗုဒ္ဓဘာသာမရှိတဲ့နေရာ အချိန်အခါတွေမှာလည်းအချို့ရသေ့၊ ရဟန်းတွေရတယ်။ ၅။ အရိယဝိဇ္ဇာ … Read more